Iindaba - UkuGaya umgubo
Izixhobo zokugaya izixhobo zokujiya
Kwizixhobo zokusila zomgubo, izixhobo zokuhambisa izinto ezisetyenziselwa ukuhambisa zihlala zisetyenziselwa ukuhambisa izinto. Bathumela oomatshini abathembele kumjikelezo ojikelezayo ukuze batyhale izinto ezininzi zentshukumo ethe tyaba okanye ukuhambisa okuthobekileyo.
I-TLSS ye-screw conveyor ineempawu zesakhiwo esilula, i-compact, ukusebenza okuthembekileyo, ukugcinwa okufanelekileyo, ukutywinwa kakuhle, kungondliwa okanye kuthululwe kuyo yonke indawo yokusebenza, kwaye kungahanjiswa kumacala amabini kwindawo enye. Ukulungele ukuhambisa izinto eziyimpuphu kunye nezinto eziyimbudumbudu.
Isixhobo sokuhambisa i-TLSS sithwala ikakhulu senziwe nge-screw shaft, umatshini wokufaka, ukuxhoma ukuhambisa kunye nesixhobo sokuhambisa. Umzimba womoya uhanjiswe ngamacangci omoya kunye ne-mandrel. Uhambisa shaft esebenzayo ityhubhu yesinyithi engenamthungo. Ukuhambisa ubude kungasetwa ngokwemfuno.
Impact Detacher umatshini wokugaya umgubo
Uthotho lwe-FSLZ lweMpembelelo yokuGweba isetyenziswa ikakhulu njengesixhobo esincedisayo kwinkqubo yokuxuba umgubo ukwenza izinto zokukhulula umgubo kunye nokunyusa ngokufanelekileyo inqanaba lokungqengqa.
Lo matshini ikakhulu iqulunqwe owongozelelweyo feed, idiskhi stator, idisk ivili, istili, iimoto kunye nezinye iindawo. Ukuphuma kusekwe kwicala elibi le-casing kwaye kuqhagamshelwe kumbhobho wokuhambisa umoya womoya. Izinto eziphathekayo zingena kwi-inlet ephakathi yomatshini kwaye ziwela kwi-disk ejikelezayo ehamba ngokukhawuleza. Ngenxa yamandla e-centrifugal, izinto zinobundlobongela phakathi kwe-stator kunye ne-pin pin. Emva kwempembelelo, iphoswa eludongeni lweqokobhe, iiflakes zaphukile ngenxa yempembelelo eyomeleleyo, kwaye zitshizwe ngokuhamba komoya kwiqokobhe ukuya kwizibuko lokukhupha ukugqiba inkqubo yokukhulula umgubo.
Umcoci kwilori yomgubo
Umcoci sisixhobo esibalulekileyo kwilitye lokusila. Isebenzisa isenzo esidityanisiweyo sokucoca kunye nokuhamba komoya ukukrola umgubo.
Izinto zokondla zisebenzisa ukungcangcazela kwesixhobo sokondla ukwenza ukuba izinto zigubungele ububanzi besikrini. Ukuxhomekeka ekungcangcazelweni komzimba wesikrini, imathiriyeli iya phambili kwaye ityibilikisiwe kumphezulu wescreen kwaye isasazwa kwiscreen semaleko emithathu. Ngaphantsi kwentshukumo edityanisiweyo yokungcangcazela kunye nokuhamba komoya, loo nto ihlelwe kwaye yahlulwe ngokungqinelana nobungakanani beengqungquthela ezahlukeneyo, ubunzima bomxhuzulane othile kunye nesantya sokumiswa.
Ngexesha lenkqubo yokuhlanjululwa komgubo, uxinzelelo olubi lokuhamba komoya kudlula kulungelelwaniso lwezixhobo, ukufunxa ubutyobo bomxhuzulane othile ophantsi, amasuntswana amakhulu atyhalelwa phambili emsileni wesikrini, amasuntswana amancinci awela kwiscreen, kunye nezinto Ukugqitha kwiscreen kuqokelelwa Kwitanki lokuhambisa izinto, izixhobo ezahlukileyo ezisuswe ngesixhobo sokuhambisa itanki kunye nebhokisi ekhupha izinto, kwaye ziyakhutshwa ngokweemfuno zenkqubo.